Zvinyorwa zvaLaura Himmer pane Martech Zone |
Zvinyorwa na Laura Himmer
Laura Himmer mupepeti mukuru. Yake niche nzvimbo ndeyeKushambadzira Gwara, Mufashoni blogging, Lifestyle uye inokurudzira kunyora. Iye akasimba akasimba uye anoda iyo yoga. Laura mukadzi asingatyi uye anofarira mafaro.
10 Inoratidzirwa Nzira dzekutyaira Traffic kune Yako Ecommerce Webhusaiti
Chipiri, August 20, 2019 Chipiri, August 20, 2019 Laura Himmer
"Ecommerce Brands iri Kutarisana ne80% Kukundikana Rate" Inoshanda E-commerce Kunyangwe izvi zvinoshungurudza huwandu, Levi Feigenson akabudirira kugadzira $ 27,800 mumari mumwedzi wekutanga webhizimusi rake re-e-commerce. Feigenson, nemukadzi wake, vakaparura eco-inoshamwaridzika accessories brand inonzi Mushie muna Chikunguru we2018. Kubva ipapo, hapana kudzokera kumashure kune varidzi pamwe neyechiratidzo. Nhasi, Mushie anounza madhora mazana mana nemazana mashanu ezviuru mukutengesa. Panguva ino yemakwikwi e-commerce zera, uko 450,000% yekutengesa
Muvhuro, Kukadzi 4, 2019 Chitatu, October 28, 2020 Laura Himmer
Iyo e-commerce indasitiri inotarisirwa kukura ichienderera mberi mumakore anotevera. Nekuda kwekufambira mberi kwetekinoroji uye musiyano mune zvevatengi zvekutenga zvaunofarira, zvichave zvakaoma kubata forts. Vatengesi vakashongedzerwa zvakakwana nemaitiro azvino uye tekinoroji vanozobudirira zvakanyanya kana vachienzaniswa nevamwe vatengesi. Sezvakataurwa mushumo kubva kuStatista, wepasi rose mutengesi e-commerce mari inosvika kusvika kumadhora 4.88 trillion na2021. Nekudaro, unogona kufungidzira kuti musika unomhanyisa sei